Translations < Myanmar (Burmese) < Multisite < GlotPress — WordPress.org
Translation of Multisite: Myanmar (Burmese)
ဒီစနစ်ေပါ်တွင် ထိုနာမည်ြဖင့် ဆိုဒ်မရှိပါ။	 Details
ဒီစနစ်ေပါ်တွင် ထိုနာမည်ြဖင့် ဆိုဒ်မရှိပါ။
2012-02-03 20:57:41 UTC
ေဒတာေဗ့ဇယားများ ေပျာက်ေနသည်။	 Details
2012-02-03 20:57:40 UTC
အများသံုးဆိုဒ်သည် URL တွင် port နံပါတ် မပါမှသာ အလုပ်လုပ်နိုင်ပါသည်။	 Details
အများသံုးဆိုဒ်သည် URL တွင် port နံပါတ် မပါမှသာ အလုပ်လုပ်နိုင်ပါသည်။
ဒီသတင်းပို့ချက်ကိုသာ ဆက်လက်ရရှိေနလျှင် သင့်ေဒတာေဗ့တွင် ေအာက်ပါ ဇယားများ ပါဝင်သလား စစ်ေဆးြကည့်ပါ။ :	 Details
ဒီသတင်းပို့ချက်ကိုသာ ဆက်လက်ရရှိေနလျှင် သင့်ေဒတာေဗ့တွင် ေအာက်ပါ ဇယားများ ပါဝင်သလား စစ်ေဆးြကည့်ပါ။ :
<a target="_blank" href="http://codex.wordpress.org/Debugging_a_WordPress_Network">ကုဒ်မှားယွင်းမှု သတင်းပို့ချက်</a> စာမျက်နှာကို ဖတ်ပါ။ ထိုေနရာတွင်ရှိေသာ အချို့လမ်းညွှန်ချက်များသည် ဘယ်ေနရာမှားေနသလဲ ရှာေဖွနိုင်ရန် သင့်ကို အကူအညီြဖစ်ပါလိမ့်မည်။	 Details
<a target="_blank" href="http://codex.wordpress.org/Debugging_a_WordPress_Network">ကုဒ်မှားယွင်းမှု သတင်းပို့ချက်</a> စာမျက်နှာကို ဖတ်ပါ။ ထိုေနရာတွင်ရှိေသာ အချို့လမ်းညွှန်ချက်များသည် ဘယ်ေနရာမှားေနသလဲ ရှာေဖွနိုင်ရန် သင့်ကို အကူအညီြဖစ်ပါလိမ့်မည်။
အခု ကွ​ျန်ေတာ် ဘာ​လုပ်​ရ​မှာ​လဲ ?	 Details
အခု ကွ​ျန်ေတာ် ဘာ​လုပ်​ရ​မှာ​လဲ ?
2012-03-19 20:22:42 UTC
<strong><code>%1$s</code> ဆိုဒ်ကို ရှာမေတွ့ပါ။</strong> <code>%3$s</code>ေဒတာေဗ့တွင် <code>%2$s</code> ဇယားကိုရှာြကည့်ပါ။ မှန်ကန်ရဲ့လား ?	 Details
<strong><code>%1$s</code> ဆိုဒ်ကို ရှာမေတွ့ပါ။</strong> <code>%3$s</code>ေဒတာေဗ့တွင် <code>%2$s</code> ဇယားကိုရှာြကည့်ပါ။ မှန်ကန်ရဲ့လား ?
2012-02-03 20:57:38 UTC
<strong>ေဒတာေဗ့ ဇယားများေပျာက်ေနသည်။</strong> ဒါက MySQL အလုပ်လုပ်မေနဘူးလို့ အဓိပ္ပါယ်ရသည်။ WordPress ကို မှန်ကန်စွာ ထည့်သွင်းမထားြခင်း သို့မဟုတ် တစ်စံုတစ်ေယာက်မှ <code>%s</code> ကိုဖျက်လိုက်ြခင်း ြဖစ်မည်။ တကယ်ကို သင့် ေဒတာေဗ့ကို စစ်ြကည့်ဖို့ လိုအပ်ေနပါသည်။	 Details
<strong>ေဒတာေဗ့ ဇယားများေပျာက်ေနသည်။</strong> ဒါက MySQL အလုပ်လုပ်မေနဘူးလို့ အဓိပ္ပါယ်ရသည်။ WordPress ကို မှန်ကန်စွာ ထည့်သွင်းမထားြခင်း သို့မဟုတ် တစ်စံုတစ်ေယာက်မှ <code>%s</code> ကိုဖျက်လိုက်ြခင်း ြဖစ်မည်။ တကယ်ကို သင့် ေဒတာေဗ့ကို စစ်ြကည့်ဖို့ လိုအပ်ေနပါသည်။
သင်သည် ဒီကွန်ယက် ပိုင်ရှင်ြဖစ်လျှင် MySQL ေကာင်းမွန်စွာ အလုပ်လုပ်ေနြခင်း ရှိမရှိနှင့် ဇယားအားလံုး အမှားကင်းသလား စစ်ေဆးြကည့်ပါ။	 Details
သင်သည် ဒီကွန်ယက် ပိုင်ရှင်ြဖစ်လျှင် MySQL ေကာင်းမွန်စွာ အလုပ်လုပ်ေနြခင်း ရှိမရှိနှင့် ဇယားအားလံုး အမှားကင်းသလား စစ်ေဆးြကည့်ပါ။
သင့်ဆိုဒ် မေပါ်လျှင် ဒီကွန်ယက် ပိုင်ရှင်သို့ ဆက်သွယ်ပါ။	 Details
သင့်ဆိုဒ် မေပါ်လျှင် ဒီကွန်ယက် ပိုင်ရှင်သို့ ဆက်သွယ်ပါ။
ေဒတာေဗ့ ဆက်သွယ်မှု တည်ေထာင်စဉ် အမှားအယွင်းရှိသည်။	 Details
ေဒတာေဗ့ ဆက်သွယ်မှု တည်ေထာင်စဉ် အမှားအယွင်းရှိသည်။
ဒီဝန်ေဆာင်မှု လက်ခံေဆာင်ရွက်သူထံတွင် မည်သည့်ဆိုဒ်မျှ သတ်မှတ်မထားပါ။ သင် ဒီကွန်ယက်ပိုင်ရှင်ဆိုလျှင် အကူအညီရရန် <a href="http://codex.wordpress.org/Debugging_a_WordPress_Network">WordPress ကွန်ယက် အမှားရှာေဖွြခင်း</a> တွင် စစ်ေဆးြကည့်ပါ။	 Details
ဒီဝန်ေဆာင်မှု လက်ခံေဆာင်ရွက်သူထံတွင် မည်သည့်ဆိုဒ်မျှ သတ်မှတ်မထားပါ။ သင် ဒီကွန်ယက်ပိုင်ရှင်ဆိုလျှင် အကူအညီရရန် <a href="http://codex.wordpress.org/Debugging_a_WordPress_Network">WordPress ကွန်ယက် အမှားရှာေဖွြခင်း</a> တွင် စစ်ေဆးြကည့်ပါ။
ဒီဆိုဒ် မရှိေသးပါ။ <a href="%s">%s</a> ကို ြကိုးစားြကည့်ပါ။	 Details
ဒီဆိုဒ် မရှိေသးပါ။ <a href="%s">%s</a> ကို ြကိုးစားြကည့်ပါ။
2012-02-03 20:57:42 UTC
<p><em>သင်ရှာေဖွေနေသာ <strong>%s</strong> ဆိုဒ် မရှိေသးပါ။</em></p>	 Details
<p><em>သင်ရှာေဖွေနေသာ <strong>%s</strong> ဆိုဒ် မရှိေသးပါ။</em></p>
<p><em>သင်ရှာေဖွေနေသာ <strong>%s</strong> ဆိုဒ် မရှိေသးပါ။ သို့ေသာ် ယခု သင်ဖန်တီး ြပုလုပ်လိုက်ပါ !</em></p>	 Details
<p><em>သင်ရှာေဖွေနေသာ <strong>%s</strong> ဆိုဒ် မရှိေသးပါ။ သို့ေသာ် ယခု သင်ဖန်တီး ြပုလုပ်လိုက်ပါ !</em></p>